Ny LMG tsara indrindra amin'ny vanim-potoana faha-9 amin'ny Call of Duty Mobile | la-manette.com
Ny LMG tsara indrindra amin'ny vanim-potoana faha-9 amin'ny Call of Duty Mobile
4 février 2021 feh Mathilde Grimard
Rehefa milalao lalao battle royale toy ny Call of duty Mobile, ny adrenalinina haingana tsapanao rehefa miatrika fanamby ianao. fahavalo mampientam-po kokoa noho ny zava-drehetra ny melee. Ny tena mampientam-po kokoa dia ny fahatsapana hery azonao rehefa avy nandripaka ekipa iray manontolo tao anatin'ny bala iray. Saingy raha te hanatratra izany zava-bita izany dia mila manana LMG tsara indrindra amin'ny COD Mobile ianao.
Ny basy milina maivana na LMG dia tena ilaina ary iray amin'ireo fitaovam-piadiana ankafizina indrindra ao amin'ny Call of Duty Mobile taorian'ny basy fanafihana. Misy basy milina maromaro azo alaina ao amin'ny lalao, ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia hotanisaiko ny fahaiza-manaony ary hametraka azy ireo mifanaraka amin'izany. Noho izany, afaka misafidy ny LMG tsara indrindra amin'ny COD mobile Season 9 ianao araka ny safidinao.
Lisitry ny basy milina maivana ao amin'ny Call Of Duty Mobile Season 9
Rmarika: ny toetran'ny basy milina maivana voatanisa etsy ambony, toy ny fahasimbana sy ny fahamarinany, no toetra tsy misy ifandraisany. Azonao atao ny manova ny LMG anao miaraka amin'ny kojakoja mba hanatsarana bebe kokoa ireo fahaiza-manao ireo.
Ahoana ny fisafidianana ny basy milina maivana (LMG) tsara indrindra?
Ny basy milina maivana an'ny COD Mobile dia miavaka amin'ny haben'ny gazetiny. Noho izany dia afaka mitazona bala 60-100 amin'ny fotoana iray ireo poleta ireo, miatrika fahavoazana lehibe amin'ny tifitra bala nefa tsy mila mamerina matetika. Na izany aza, misy ny fifampiraharahana amin'ny gazety lehibe LMGs. Ny gazety lehibe dia mampitombo ny lanjan'ny fitaovam-piadiana ary noho izany dia mampihena ny fivezivezeny. Fanampin'izany, ny LMG ao amin'ny COD Mobile dia tsy dia marina loatra, na izany aza, ny LMG tsara kokoa amin'ny COD Mobile dia ilaina amin'ny ady midadasika.
Vakio ihany koa: Fanjonoana ao amin'ny Impact Genshin: Torolàlana momba ny fotoana hamerenana ny trondro
Ka ny hevitra dia ny hisafidy ny LMG tsara indrindra amin'ny COD Mobile amin'ny alàlan'ny fampifandanjana ny haben'ny charger, ny fivezivezena ary ny marina. Satria raha mikasika ny fahasimbana, ny ankamaroan'ny LMG ao amin'ny Call of Duty Mobile Season 9 Nightmare dia manana fahasimbana mitovy amin'izany afa-tsy ny M4LMG.
LMG 3 tsara indrindra amin'ny COD Mobile
Holger 26 amin'ny Call of Duty Mobile
Ao amin'ny COD Mobile Season 9 Nightmare, ny LMG tsara indrindra hilalao dia ny Holger 26. Ny USP an'ny Holger 26 dia ny fahaizany, ity LMG ity dia azo amboarina amin'ny endrika samihafa, manome safidy tsara indrindra amin'ny sehatra maro. Ary koa, raha oharina amin'ireo LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile, ny Holger 26 dia somary maivana. Raha manampy kojakoja maivana amin'izany ianao dia mahazo LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile, izay mihoatra ny M4LMG, RPD ary Hades.
Ny antontan'isa LMG fototra ao amin'ny Call of Duty Mobile dia mety ho toa tsy misy dikany amin'ny taratasy, fa miaraka amin'ny kojakoja mety, ity LMG ity dia mpanova lalao ary manjaka amin'ny basy sy SMG. Ny Holger 26 dia manana fahasimbana 31, marina amin'ny 53, ary isan-karazany 60. Saingy amin'ny tahan'ny afo no mamiratra ny Holger ho LMG tsara indrindra amin'ny COD Mobile, miaraka amin'ny taham-pahavitrihana mahavariana amin'ny 71. ambony indrindra amin'ny lisitra raha oharina amin'ireo LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile.
Ny M4LMG amin'ny Call of Duty Mobile
Araka ny voalazanay etsy ambony, ny M4LMG no hany LMG manana fahasimbana avo indrindra, ary koa ny fahitsiana, ny tahan'ny afo ary ny salan'isa 32, 61, 63, ary 58. Ireo isa ireo dia tsy ambony na ambany indrindra amin'ity sokajy ity, izay mahatonga ny M4LMG ho iray amin'ireo LMG tsara indrindra amin'ny COD Mobile.
Vakio ihany koa: Ny lalao piozila 22 tsara indrindra ho an'ny iOS, iPhone ary iPad
Rehefa nanandrana ny M4LMG tamin'ny fomba ady royale izy dia nahitana fahasimbana 31 rehefa nikendry ny lohany. Etsy an-danin'izany, ny firehetan'ny vatana dia mora simba eo anelanelan'ny 25 sy 29HP, arakaraka ny tahan'ny hit / miss. Raha ny lafy ratsiny, ny mahatonga ny M4LMG COD Mobile ho LMG faharoa tsara indrindra dia ny fihemorana mitsangana mahery vaika, na dia azo ahena aza izany noho ny fanampian'ny kojakoja mety.
Ny ratsy indrindra anefa dia ny tsy hahitanao ny iray amin'ireo LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile, ny M4LMG, na aiza na aiza amin'ny sarintany. Ka ny safidy tsara indrindra dia ny mitazona M4LMG mahazatra ao amin'ny arsenalinao izay azonao alaina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina. Amin'ny lafiny iray, raha mikasa ny hampiasa ny M4LMG amin'ny mode Multiplayer ianao, dia manoro hevitra mafy aho ny hampiasa props sy ny perk "hazavana" mba hampitomboana ny fivezivezena, raha tsy izany dia hihetsika toy ny slug ianao, ka ho lasa rembiny.
RPD ao amin'ny Call of Duty Mobile
Andeha isika hifindra amin'ny LMG fahatelo tsara indrindra amin'ny COD Mobile Nightmare Season 9, dia ny RPD. Andao hifantoka amin'izay atolotry ny RPD raha misafidy ny handeha amin'ity fitaovam-piadiana ity ianao.
Voalohany indrindra, ny RPD dia iray amin'ireo LMG izay hita matetika amin'ny karatra COD Mobile. Izy io dia manolotra taham-pahasimbana avo 31 ary mitovy amin'ny 61 amin'ny M4LMG. Na izany aza, ity LMG ity dia lavo amin'ny LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile amin'ny taham-afo, izay 66 ho an'ity LMG ity. Ary koa, raha te hampiasa LMG misy boaty ammo lehibe ao amin'ny COD Mobile ianao, dia ny RPD no mety aminao.
Vakio ihany koa: Famerenana ny lalao BoxVR - Ny fanazaran-tena virtoaly tsara indrindra amin'ny ady totohondry
Na izany aza, miaraka amin'ireo tombontsoa rehetra ireo dia misy fifanakalozam-bola avo lenta raha ny momba ny fivezivezena. Ny RPD dia manana fihetsehana kely 49 raha oharina amin'ireo fitaovam-piadiana roa voalohany. Izany indrindra no antony ametrahana ny RPD ambany kokoa amin'ny lisitry ny LMG tsara indrindra amin'ny finday COD. Koa raha milalao miaraka amin'ny RPD ianao dia ataovy izay hahazoanao paik'ady handresena ny fahaleovan-tenany, sao tsy ho ela dia ho faty ianao.
LMG tsara indrindra an'ny COD Mobile: Fehiny
Izany dia mitondra antsika amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Manantena aho fa ny COD Mobile LMG tsara indrindra voalaza eto dia hanampy anao hisafidy ny fitaovam-piadiana tianao amin'ny lalao. Ataovy ao an-tsaina koa fa ireo laharana ireo dia famantarana fotsiny izay mety hampitombo ny vintanao handresy. Tsy miantoka tanteraka ny fandresenao izy ireo, satria misy antony hafa koa misy fiantraikany amin'ny lalao, ny fotoana manontolo nilalao fitaovam-piadiana, ankoatra ny hafa. Raha ny tokony ho izy, lazao anay hoe LMG amin'ny COD Mobile Season 9 Nightmare no heverinao fa tsara indrindra ao amin'ny boaty fanehoan-kevitra etsy ambany!
Ny lalao PS Plus maimaim-poana amin'ny Novambra 2021 dia misy lohateny 6, saingy tsy misy lalao lehibe
Ny basy sniper tsara indrindra amin'ny COD Mobile Season 9